Sida-Loo – OneFuture
Sida aad u caawin ama kaalmeen karto
Isqor kaalmeeyo ama caawiyo ahaan: Ama ha noqoto/ahaato hal saacad ama kulan joogto ah, nooc walba oo ka qayb gal ah ama caawinaad ah ama kaalmeen ah waynu soo dhawayn. Samee muuqaal-kaaga. hadii aad su’aalo haysato, na la soo xiriir
Dalacsiin/ faalinta /faahfaahinta wax yaalaha aynu bixino: Miyaad taqaanaa dad u baahan caawin-teena ama kaalmeen-teena? Wax ka ogeysii hay’ada Hal-mustaqbal (Onefuture) ee tus na boosteegadeena (website-kaana internetka ah).
Sidoo kale waynu jecel nahay in aynu ku soo marno meesha aad joogtid oo aynu wax kaa ga sheegno ama kuu soo bandhigno hay’adeena ama waxaynu kari karnaa in aynu kuu soo dirno wax macluumaad ah.
Noqo Wada-hawlgalaheena: la shaqeyta hay’ado jiro waxaynu kari karnaa in aynu caawino ama kaalmeeno si dag dag ah oo wax ku ool ah. Waa wax aad u fiican hadii aad hay’adeena dadka u sheegtid, sidaa na waxay u dhici kartaa siyaabo badan, tusaalo ahaan, adigoo dadka uga sheekeen hay’adeena toos toos ahaan, ama aad kusheegto warsidahaaga soo socdo (Newsletter) ama Facebook-kaaga.
Ku biir kooxdeena asaasiga ah: Waad sameeysay muuqaal (boroofayl) laakiinse waxaad rabtaa ama dooni in aad si dheeraad ah ugu qayb gasho? Miyaad rabtaa ama dooneysaa in aad ka noqoto qof firfircoon hay’ad cusub oo faa’ido doonka ahayn?
Marka waynu rabnaa ama doonaynaa in aynu warkaaga maqalno, noogu soo dir codsigaaga iimeelka info@onefuture.com kadib anagaa kula soo xiriiri doona.
Tabaruc / Deeq: Hal-Mustabal (Onefuture) waa hay’ad oo aan faa’ido doonka ahayn oo ku bilaabatay si ismaalgalin buuxda ah. Waxaynu na ku mahad galin tabaruc walba ama deeq walba oo aynu u isticmaali doono si aynu u gaarno u na taageerno dad badan. Haduu codsi jiro, anagoo ku faraxsan baynu siin ama sheegi si sax ah oo qayxan sida aynu u isticmaalno lacagta aynu hayno ama helno.